China MFi akwụkwọ ikike Ikuku chaja DW03 factory na soplaya | Lantaisi
Chaja ikuku enwetara MFi DW03
Ọ bụ chaja ikuku 2-in-1 maka iPhone 12, TWS na iWatch. Ọ gafere asambodo MFi Apple wee nweta mmepụta oke.
Ntinye: DC 9V-2A,DC 12V-2A
Mpụta 1: 15W Max
Mpụta 2: 3.5W maka iWatch
Ogologo Nchaji:: 3-8mm
Ọkọlọtọ/Asambodo:: QI, FCC, CE, ROHS, MFI
Ọnụego mgbanwe: ≧80%
Nha ịbụ:: 194g
Nha: 68*140*6.8 mm
Na a ụda azụmahịa kredit, magburu onwe mgbe-sales ọrụ na oge a n'ichepụta ụlọ ọrụ, we have earned an excellent reputation n'etiti ndị ahịa anyị gafee ụwa maka OEM ahaziri China Mill Finish Chemical Equipment Coils Ikuku Charger Pad Aluminom Plate , Warmly welcome to cooperate and develop with anyi! anyị ga-aga n'ihu na-enye ngwa ahịa nwere ezigbo mma yana ọnụahịa ire ere.
【Ịdị mma Dị elu】Mpempe chaja nke Lantaisi na-anakwere ahụ alumini-alloy yana imewe iko dị ọkụ ma na-enye gị ọmarịcha anya na mmetụta na-emetụ n'ahụ. Ogwe iko nwere ike ichebe ngwaọrụ gị site na ncha. Ebube dị n'elu bụ ihe na-eme ka oyi na-atụ na-adịghị mma ma kwadebere ya na ụkwụ 4 na-adịghị amị amị iji wetara gị ahụmịhe ịkwụ ụgwọ kwụsiri ike na enyi. Were akwa silicone na-adịghị amị amị nke nọọrọ onwe ya.
【Akụkọ Enyi na Enyi】Igwe chaja ikuku nwere ike ịgba ụgwọ site na ọtụtụ ikpe ekwentị (≤ 6mm/0.24inch) na-ewepụghị igbe ekwentị gị ugboro ugboro. Ọ dịghị ọzọ fumbling n'ihi na gị cables nnọọ na-etinye ngwaọrụ gị na nri ọnọdụ. Biko mara na pụọ ​​na mgbakwụnye igwe iji gbochie ndabichi na ịchaji.
【Nchaji nchekwa】Chaja magnetik iWatch arụnyere n'ime ya, ọ dịghị mkpa ịwụnye eriri nchaji. Qi, CE, FCC, ROHS kwadoro ma enyochala ya dị ka akwụkwọ ikike MFI. Ihe nchekwa arụnyere n'ime ya pụọ ​​​​na ịchaji n'ofe, oke na oke ọkụ, njikwa okpomọkụ, nchọpụta ihe mba ọzọ, hụ na echekwabara ngwaọrụ gị niile n'oge usoro ịchaji.
【Ihe ị nwetara】1 x 2-in-1 chaja ikuku, 1 x eriri nchaji, akwụkwọ ntuziaka onye ọrụ 1 x. Anyị na-enye akwụkwọ ikike nke ọnwa 12, ọrụ ndị ahịa na-anabata elekere 24.
Nke gara aga: Ngwongwo ụlọ ọrụ China agbakwunyere chaja ikuku ikuku dị anya na-akwado chaja ogologo anya maka ekwentị
Osote: chaja ikuku enwetara MFM MW01